monja nitranga teny Anjanadrambony Ambavahaditokana ny 26 desambra lasa teo. Raha tsiahivina, tsy hita ity zazavavy kely ity ny datin’ny 24 desambra raha tsy nisy tao an-tokantrano avokoa ireo ray aman-dreniny noho ny asa fitadiavana. Ny 26 desambra vao hita izy saingy efa tsy nisy fofon’aina intsony ka ny atin’akanjony no namatoran’ireo tsy mataho-tody ny tendany. Teny Faliarivo Ampitatafika no hita ny razana. Niainga teo ny famotorana nataon’ny mpitandro ny filaminana niampy ny ahiahin’ireo ray aman-drenin’i Etsellah ka tovolahy iray vao 14 taona monja niaraka tamin-dreniny no nampidirina am-ponja, fotoana vitsy taorian’izay. Iray tanàna amin’ireo nanana ny maty ihany ireto farany. Nilaza mantsy io tovolahy kely io fa saika hanolana an’i Estellah kely ary ny reniny no nampirisika azy tamin’izany. Ny datin’ny 11 febroary teo no niakatra fampanoavana izy ireo ka raim-pianakaviana iray izay efa nanana olana tamin’ireo ray aman-drenin’i Etsellah ihany koa no nampidirina am-ponja. Mpiara-monina ihany izy ireo raha araka ny fanazavan’ny dadan’i Etsellah ary efa tena nahiahiany hatramin’izay.